Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Waddanka Pakistaan. – Bogga Calamada.com
Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Waddanka Pakistaan.
Naftii hure ka tirsanaa katiibada Istish-haadiyiinta Mujaahidiinta xarakada Daalibaan Pakistan ayaa weerar istish-haadi ah ku beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xukuumadda dalka Pakistaan xilli ay marayeen goob si aad ah ammaankeeda loo ilaaliyo.
Camaliyaddan Istish-haadiyadda oo ka dhacday degmada Kuweyta oo dhacda koonfur galbeed dalka Pakistaan waxaa fuliyay Mujaahid Istish-haadi ah kaas oo gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa bartanka ka dhigay kolonyada ciidamada gaarka xukuumadda camiilka ah ee Islamabaad.
Masuul u hadlay xukuumadda dabadhilifka Pakistan waxa uu sheegay in dagaalyahan ku hubeysan gaari miinaysan uu weerar ka fuliyay bar kantarool oo ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo isagoona xusay in ciidamadooda looga dilay 3 askari oo qura loogana dhaawacay 20 kale.
Xarakada jihaaadiga Daalibaan Pakistan oo sheegatay masuuliyadda camaliyadda waxay sheegtay in ay khasaare lixaad leh gaarsiiyeen ciidamada khaaska ah ee xukuumadda Pakistan ka dib camaliyad Nafhurnimo oo halyey ka tirsan guutadoda Istish-haadiyiinta uu ka fuliyay koonfur galbeed waddanka Pakistan.
Ilo xog-ogaal ah waxay warbaahinta u sheegeen in weerarka ay ku nafwaayeen inka badan 30 askari oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah ee xukuumadda Islaamabaad iyo dhaawacyo fara badan halka sidoo kale weerarka lagu burburiyay 5 gaari oo kuwa dagaalka ah.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayeen burburka iyo khasaaraha lixaadka leh ee ka dhashay camaliyadda Istish-haadiga waxaana la arkayay qaar ka mid ah gawaarida aanay xabaddu karin oo ay camaliyaddu galaafatay.
Xarakada Daalibaan Paakistaan oo ka jihaadda waddanka Pakistaan waxay horay u fulisay weeraro laayaan ah oo lagu beegsaday saraakiisha iyo xubno ka tirsan xukuumadda dabadhilifka Islamabaad weerarkan Istish-haadiga ayaana noqonaya weerarkii ugu horreeyay Istish-haadi ah oo lala beegsado ciidamada dowladda tan iyo markii waddanka Afghanistan oo jaar dhow la ah Pakistan ay gacanta ku dhigeen ciidamada Imaarada islaamiga Afghnaistan.